The Rohingya News Bank : Minbya
Showing posts with label Minbya. Show all posts
Labels: 2021, en, Explortion, killed, Minbya, News
People take photos of unexploded ordnance in northern Rakhine in this file photo. Some 3000 people in Minbya remain trapped by fighting between the military and an armed ethnic group. Photo - EPA
Labels: 2019, Armed clash, en, Minbya, News, Rakhine
Myanmar soldiers stand guard in Maungdaw. Photo: AFP
Seven people were killed when artillery rounds slammed intoamonastery where they were sheltering from firefights between military and the Arakan Army (AA) in Myanmar's Rakhine state, witnesses said Tuesday.
Labels: 2019, en, killed, Minbya, Mizzima, Myanmar Military, News
AA Abducts Five Chin Ethnic Villagers, Leaving Death Threats to the Rest (Chin World)
The Arakan Army (AA) abducted five Chin Ethnic villagers in Rakhine State’s Minbya Township on May 15 and dissuaded the remaining villagers with death threats from notifying the incident to authority and media,avillager told Chin World Media.
Labels: 2019, AA, Chin Villgers, Dead, en, Minbya, News, Tatmadaw
Feb. 12, 2019.
Maung Kyaw, administrator of Kyauk Khot village, was killed by unknown assailants at his home in Minyba township's Tharyarkone village tract, western Myanmar’s Rakhine state,
A village administrator was shot dead on Tuesday at his home inatownship in western Myanmar’s violence-ridden Rakhine state, prompting speculation by local officials that the rebel Arakan Army, whose fighting with Myanmar forces has intensified in recent months, was behind the killing.
Labels: 2019, AA, en, killed, Minbya, News, Rakhine, RFA English
A Minbya Township signpost. / Min Aung Khine / The Irrawaddy
By Min Aung Khine 24 January 2019
SITTWE—A resident of Pann Myaung village in Rakhine State’s Minbya Township was shot dead in front of his house on Wednesday evening, according to township police.
U Maung Aye Thein, 56, was shot five times at close range at around9p.m., Police Captain Mya Zaw told The Irrawaddy.
Labels: 2019, Crimes, en, Minbya, Murder, News, Rakhine
( 16.11.2017 ) သြဂုတ် ၂၅ ရက် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက် မှုဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင် ပတ်သက် သူများ အကြမ်းဖက် တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေဖြင့် အရေးယူ ( အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ )
နိုဝင်ဘာ ၁၆ ၊ ၂၀၁၇
သြဂုတ် ၂၅ ရက် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ
အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေဖြင့် အရေးယူ
လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် နိုဝင်ဘာ ၇ ၊ နံနက် ၄ နာရီ မှစတင်၍ ဟာဘီ ကျေး ရွာအုပ်စု၊ ဟာဘီအနောက်ရွာ၊ ဟာဘီအလယ်ရွာ နှင့် ဟာဘီအရှေ့ရွာတို့အတွင်း ရှောင်တခင် စစ်ဆေးစဉ် မသင်္ကာသူ ၃၈ ဦးအား တွေ့ရှိသဖြင့် ခေါ်ယူမေးမြန်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး စစ်ဆေးချက်အရ ဩဂုတ် ၂၅ ရက် အ ကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သူ မိုဟာမက်ဂျာဝိစ် ပါ ၁၉ ဦးအား ပြင်ဖြူနယ်မြေစခန်း၌ ၂၀၁၇ ၊ အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၅၀ (က)(ဈ) ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူခဲ့မှု သတင်းအား နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ကျန်မသင်္ကာသူ အိစ္စမိုင်ပါ ၁၉ ဦးအား ဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ အကြမ်းဖက်မှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သဖြင့် အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၅၀ (က)(ဈ) ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူခဲ့သည်။
ဖမ်းဆီးထားသည့် မသင်္ကာသူ ၂၀ ဦး အနက်မှ အကြမ်းဖက်မှုတွင် ပါဝင်သည့် ၄ ဦး
လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် မောင်တောမြို့နယ် ဂေါ်ဒူသာရ အနောက်ရွာ နှင့် ဂေါ်ဒူသာရ ချောင်းဝကြားအနီးရှိ ပုဇွန်ကန်များတွင် အကြမ်းဖက်သမားများ၊ တရားခံပြေးများ ခိုအောင်း နေကြာင်း သတင်းအရ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက် နံနက်ပိုင်းမှ ညနေပိုင်းအထိ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ အကြမ်းဖက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ဒုညောင်ပင်ကြီးကျေးရွာနေ မသင်္ကာသူ မာမတ်ဟာရုံ ပါ ၂၀ ဦးအား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး ဥပဒေလုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့်အညီ စစ်ဆေးဆောင်ရွက် နေမှု သတင်းအား နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
မသင်္ကာသူ မာမတ်ဟာရုံ ပါ ၂၀ ဦးအား စစ်ဆေးမေးမြန်းရာ မောင်တောမြို့နယ်၊ မြို့သူကြီး ကျေးရွာနေ မာမတ်ကော်ဘီ(၃၈)နှစ် ပါ ၄ ဦးအား အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူ ထားပြီး ကျန် ၁၆ ဦးအား ဆက်လက်စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
မင်းပြား နှင့် မြောက်ဦး မြို့နယ်အတွင်း မိုင်းများ ပေါက်ကွဲ၊ ကျောက်တော် နှင့် ပုဏ္ဏားကျွန်း
မြို့နယ်အစပ်၌ မိုင်း ၄ လုံး တွေ့ရှိ
တပ်မတော်ထောက်ပံ့ရေး မော်တော်ယာဉ် ၃ စီးသည် မင်းပြားမြို့နယ် ၊ ကမ်းနီမှ ဆေးပစ္စည်းများ တင်ဆောင် ပြီး နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်၊ နံနက် ၈ နာရီ မိနစ် ၂၀ တွင် ထွက်ခွာခဲ့ရာ မင်းပြားမြို့နယ် ၊ ဖားပျော် (ချင်းရွာ) ၏ အနောက်ဖက် ၁ မိုင်ခန့်အကွာ ရန်ကုန်- စစ်တွေကားလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် ၈၄/၄ နှင့် ၎င်းအနီးရှိ အုတ်ခုံ တံတားတို့တွင် မိုင်း ၃ လုံး ပေါက်ကွဲခဲ့သည်။
မိုင်းပေါက်ကွဲကြောင့် ဒေါင်ဖန်းယာဉ် ၁ စီးနှင့် ဖောကားယာဉ် ၂ စီးတို့တွင် ရှေ့လေကာမှန် မိုင်းအစ ၁၂ ချက်ခန့် ထိမှန်အက်ကွဲခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ် ကိုယ်ထည်များ ပေါက်ထွက်ခြင်း၊ လေကာမှန်ကွဲခြင်း၊ ရှေ့ တံခါးမှန် ၂ ချပ် ပျက်စီးခြင်း၊ မိုင်းအစ အချက် ၃၀ ခန့် ထိမှန်ခဲ့ကာ ဘယ်ဘက် နောက်ဘီးပေါက်ပြီး နောက်ကြည့်မှန်များ မိုင်းများ ထိမှန်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့် မော်တော်ယာဉ် ၃ စီး ပေါ် လိုက်ပါလာကြသည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် မိသားစုဝင်များ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှု မရှိကြောင်း သိရသည်။
အလားတူ နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက် ညနေ ၃ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင် တပ်မတော်ထောက်ပံ့ရေးမော်တော်ယာဉ် ၇ စီးသည် မင်းပြားမြို့မှ ထွက်ခွာခဲ့ပြီး ရန်ကုန်-စစ်တွေ ကားလမ်း မိုင်တိုင် ၁၁၆ /၃-၄ ကြား ဝေသာလီကျေးရွာ နှင့် ပေါက်တောပြင် ကျေးရွာကြားရှိ အရှည် ပေ ၂၀ ခန့် ကွန်ကရစ် တံတားအနီးသို့ ရောက်ရှိစဉ် မိုင်း ၁ လုံး ပေါက်ကွဲခဲ့ရာ တံတားအနီး အကျယ် ၃ ပေ အနက် ၁ ပေခွဲခန့်ရှိ ကျင်း ၁ ခု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး တံတား ဝဲဘက် အပေါ်လက်ယန်းတွင် ၁ ပေခွဲခန့် ကွန်ကရစ် ပလာစတာများ ကွာကျခဲ့သည်။
မိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့် မော်တော်ယာဉ်နှင့် တပ်မတော်သားများ ထိခိုက်မှု မရှိသော်လည်း မြောက်ဦးမှ ဝေသာလီ ကျေးရွာဘက်သို့ လမ်းလျှောက်လာသည့် သီလရှင် ဒေါ်သောဏထေရီ ၆၄ နှစ်မှာ ဘယ်ဘက် နားရွက် နှင့် ဘယ်ချိုစောင်း တို့တွင် ခဲစထိမှန် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့အတူ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက် နံနက် ၈ နာရီခွဲတွင် ရန်ကုန်-စစ်တွေ ကားလမ်း တစ်လျှောက်တွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်စဉ် ကျောက်တော်နှင့် ပုဏ္ဏားကျွန်း မြို့နယ်အစပ် မိုင်တိုင် ၂၄၃/၂၄၄ ကြားတွင် ကားလမ်းအနီး ပေ ၂၀ ခန့်စီ ခွာ၍ ပုံထားသော မသင်္ကာဖွယ် မြေစာပုံ ၃ ပုံအား ရှင်းလင်းရာ မိုင်း ၃ လုံး ထောင်ထားကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး အနီးပတ်ဝန်းကျင် တစ်ဝိုက် ဆက်လက် ရှာဖွေရာ မိုင်း ၁ လုံး ထပ်မံ တွေ့ရှိခဲ့သည်။
တွေ့ရှိခဲ့သည့် မိုင်း ၄ လုံးမှာ ဒေသန္တရ Remote မိုင်း အမျိုးအစားများ ဖြစ်ပြီး လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက အဆို ပါ မိုင်း ၄ လုံးအား သက်မဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Nineteen suspected of involvement in 25 August terrorist attacks arrested
Nineteen men suspected of involvement in the terrorists attacks of 25 August were arrested and charged under the anti-terrorism law.
Security forces and other personnel found 38 suspects in Harbi village (west) and Harbi village (middle) in the Harbi village-tract during surprise checks on the morning of7November. Following an investigation, it was found that 19, includingaman named Mohamed Jarwis and another man named Ismai, were strongly suspected to have been involved in the 25 August terrorist attacks. Under the anti-terrorism law,cases were filed against them at the Pyin Phyu police station.
Four out of 20 suspects found to be involved in terrorist attacks
An investigation of 20 men detained after the stakeout of an area alleged to beahiding area for fugitives resulted in the arrest of four people on suspicion of terroristic activity.
On receipt ofatip-off the that terrorists and fugitives were hiding in the prawn breeding ponds between Gordu Thara west and Gordu Thara Chaungwa,acombined team that includes security forces launchedastakeout starting on the morning of 11 November until the evening, when 20 people arrived and were immediately detained on suspicion of terrorism. Under the investigation conducted in accord with rules and regulations, four men, including Marmed Cobi of Myo Thagyi village in Maungtaw village and Marmed Haron of the village of Du Nyaungbingyi in Maungtaw Township, were filed under the anti-terrorism law, with the remaining men under investigation, it was learnt.
Three landmines exploded on Wednesday morning on Yangon-Sittway Road near the 84/4 mile marker west of Phar Pyaw (Chin Ywa) in Minbya township, Rakhine State, as three Tatmadaw trucks carrying medicine from Kamni approached, it was learnt. There were no injuries. Shrapnel from the explosions caused extensive damage to the three trucks, flattening tyres, shattering windscreens and destroying the bodies of the vehicles, according toaTatmadaw news release. No injuries were reported, it was learnt.
Later the same day, another landmine exploded nearaconcrete bridge between the 116/3 and 116/4 mile markers near Vethali Village and Pauktawpyin Village as seven Tatmadaw convoy trucks approached from Minbya. The force of the blast createda3-feet wide, 1.5-feet deep hole in the ground near the bridge and caused some ofthe concrete from the bridge’s left guard rail to peel off.
The blast didn’t damage the trucks or Tatmadaw personnel on board, but shrapnel from the explosion hit the left side of the forehead and left ear of nun Daw Thawna Htayri, 64, who was walking from Mrauk U side to Vethali Village. Her conditioncould not be determined.
Yesterday morning, security personnel were conducting security measures along theYangon-Sittway Road when they came upon three suspicious mound of earths 20 feet apart between mile markers 243 and 244 near the border of Kyauktawand Ponnagyun townships. Upon investigation, three mines were found and deactivated. A further search of the vicinity turned up another mine, which was also
deactivated. The four mines found yesterday were learnt to be remote-controlled IEDs.
Labels: 2017, ARSA, en, MDW, MIC, Minbya, mm, News
( 20.09.2017 ) မင်းပြားမြို့နယ် တန်းဆိပ်ရွာနှင့် ဆပ်ကျာရွာ အကြား ပေါက်ကွဲမှု သုံးကြိမ်ဖြစ်ပွား
မင်းပြားမြို့နယ် တန်းဆိပ်ရွာနှင့်ဆပ်ကျာရွာ အကြား ပေါက်ကွဲမှု သုံးကြိမ်ဖြစ်ပွား
ရန်ကုန်-စစ်တွေကားလမ်း မင်းပြားမြို့နယ် ဆပ်ကျာကျေးရွာအုပ်စု တန်းဆိပ် ကျေးရွာနှင့် ဆပ်ကျာ ကျေးရွာ အကြား ၀င်းဇားကျေးရွာဘက်သို့ သွားသည့်လမ်းဆုံ မိုင်တိုင်အမှတ် ၉၆/၄ နှင့် ၉၆/၅ အကြား ကား လမ်းပေါ်တွင် ပေါက်ကွဲမှု ၃ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက် ည ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ်က အမ်းမြို့နယ် ဂယ်လောင်းကျေးရွာနေ ယာဉ်မောင်း ညီညီဝင်း မောင်းနှင်လာသော ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတင်ဆောင်လာသည့် FUSO ခြောက်ဘီးယာဉ်နှင့် စစ်တွေ မှရန်ကုန်သို့ မောင်းနှင်လာသည့် ကစ္ဆပနဒီခရီးသည်တင်ယာဉ် (ယာဉ်မောင်းစိစစ်ဆဲ) တို့မှာ ယာဉ် တစ်စီးနှင့်တစ်စီး တိမ်းရှောင်သည့်နေရာ မလေးရှား ပိတောက်ပင်ခြေရင်း၌ ပေါက်ကွဲမှု(၃)ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။
ဖြစ်စဉ်ကြောင့် ကစ္ဆပနဒီခရီးသည်တင် မော်တော်ယာဉ်မှာ ၀ဲဘက်မှန် ၄ ချပ် ကွဲ သွားကြောင်း နှင့် အခင်းဖြစ် ပွားရာနေရာသို့ သက်ဆိုင်ရာက မိုင်းရှာဖွေ ရှင်းလင်းလျှက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မင်းပြားမြို့မရဲစခန်း၌ အမှုဖွင့်၍ တရားခံအားဖမ်းဆီးရမိရေး စုံစမ်းစစ်ဆေး လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
Labels: 2017, MIC, Minbya, mm, News, မင်းပြား, သတင်း